Caafimaadka | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Caafimaadka
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland oo Guddi u dirtay Deegaan Xeebeedyo Roobab mahiigaan ah ka da’een.
Maxamed Cali Nuur Jubba Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay diyaariyeen Koox qiimeyn iyo gurmad u sameysa dadka kunool Deegaan Xeebeedyada oo ay saameyeen Roobab Duufaano watay oo halkaa ka da’ay. Waxa uu tilmaamay in Isitcmaalka Telefoonada iyo Baraha Bulshada uu ka saaciday si ay dadka la wadaagaan Digniinada Saadaasha ah ee Roobabka laga ...
Roobab Mahiigaan ah oo ka da’ay Deegaano dhaca Puntland iyo Somaliland.
Roobab mahiigaanno ah ayaa khasaare ka gaystay deegaanno ka tirsan Maamul Goboleedka Puntland iyo Somaliland. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in 12 kii saac ee la soo dhaafay ay da’ayeen Roobab Mahiigaan ah, Inta la xaqiijiyay labo qof ayaa ku geeriyootay Daadad kasoo rogmay Roobka oo ku sugneed Gobolka Bari. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Maxamed Cali Nuur Jubba ...
Gudoomiye Cismaan “Dadka waxa ay ku sugan yihiin Xaalad Liidata”.
Cismaan Cumar Xuseen Gudoomiyaha Xaafadda Hanti Wadaag Degmada Jowhar ee Gobolka Shabeelaha Dhexe oo la hadlay Mustaqbal Radio ayaa sheegay in Xaalad Liidato ay ku sugan yihiin Dadka Xaafadaasi. Maanta ayuu sheegay in laga saaray Dadka Shacabka, kadib Daadad ka dhashay Roobabkii ugu dambeeyay ee ka da’ay halkaa oo go’doomiyay. Matooro Biyaha ka bixiya Xaafadda ayuu tilmaamay in maamulka Hir-Shabeelle ...
Dadka Deegaanka Baargaal oo ka Barakacaya Roobka Dabaylo Wata.
Wararka aynu ka heleyno Deegaano Xeebeedyada Gobolka Bari ayaa sheegaya in uu ka socdo Barakac ay sameynayaan Dadka Deegaanka, kadib Cabsi ay ka muujiyeen Digniin laga soo saaray in uu halkaa uu ku wajahan yahay Roob Dabaylo Xoogan Wato. Deegaanka Baargaal ayaa kamid ah Deegaanada Maanta Dadka ay ka Barakaceen si aanan saameyn ugu yeelan Roobka Dabaysha Wata ee la ...
Kala Duwanaanta Saacadaha Dalalka laga Soomayo Dowladaha Islaamka iyo kuwa kale.
Warbixintaan waxa ay ka hadleysa kala duwanaashiyaha Saacadaha Wadamada kala duwan laga soomayo, iyo inta saac ay kala horeeyaan Dalalka. Jaziiradda Comoros ee Dhacda Bariga Afrika waxaa laga soomaa 12-Saac iyo 37-Daqiiqo, Aljazeeria dhacda Waqooyiga Afrika 15-Saac iyo 45-Daqiiqo, Canada oo dhacda Waqooyiga Ameerika waxaa laga soomaa 19-Saac iyo 57-Daqiiqo. Xogtaan oo uu Uruuriyay Wargeyska Alayam oo kasoo baxa Magaalada ...
Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta XFS oo amaro dul dhigtay Goobaha laga Cunteeyo.
Shiikh Maxamed Kheyrow Xoghayaha joogtada ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka digay in la furo goobaha laga cuntooyo inta lagu guda jiro Bisha Barakeysan ee Radamaan. Waxa uu sheegay in aanan wanaagsaneen, sidaa awgeedna Wasaaradda ay amartay in gacan adag lagu qabto dadka Cuntada bisil Maalinta Ramadaanka ka iibiyo dadka aanan Soomin. Wasaaradda ayaa sidoo kale ...
Wararka ka imaanaya Deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ayaa sheegaya in Xalay Xili dambe uu ka dhacay Dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Maamulada Somaliland iyo Puntland oo muddooyinkii dambe isku hor fadhiyay. Salaadii Maqrib ee shalay ayuu dagaalkii Shalay Subax bilawday istaagay, mana jirto Cid kala dhex gashay oo joojisay dirirta labada dhinac. Rasaas iyo Madaafiic goos goos ah oo Salaadii ...
Wadamada Islaamka oo isku raacay in Khamiista ay tahay Maalinta 1-aad ee Bisha Ramadaan.
Waxaa Caawa oo idil la raadinayay Curashada Bisha Barakeysan ee Ramadaan oo Maanta aheyd 29-ka Shacbaan sanadka 1439 Hijriyada. Mana jirto Meel kamid ah Soomaaliya ama Wadamada Islaamka oo laga soo sheegay Cid aragtay Curashada Bisha Barakeysan ee Ramadaan, sidaa awgeedna Berri la buuxinayo 30-Bisha Shacbaan. Wasaaradaha Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya, Sacuudiga, Imaaraatka Carabta, Maleysia, Indonesia, Qadar, Kuwait iyo Dalal ...
Puntland oo tirokoob kasoo saartay Khasaaraha uu geystay Dagaalkii Tukaraq.
Maamulka Puntland ayaa war ay soo saareen waxa ay ku faah-faahiyeen Khasaaraha Dhimasho iyo dhaawaca uu geystay Dagaalkii Saakay ka bilawday Deegaanka Tukaraq. Waxa ay sheegeen in Dagaalka uu socday Saacado badan oo Xiriir ahaa, dhanka Maamulka Somalialnd waxa ay sheegeen in ay ka dileen Ciidamo gaaraya 41-askari halka ay ka dhaawaceen 57-kale. Waxa ay intaa ku dareen in Khasaaraha ...
Guddiga Fatahaada Gobolka Gedo oo Gudoomay lacag dhan $100 kun oo Doolar.
Deeqdaan lagu wareejiyay Guddiga Gurmadka Fatahaadaha Baardheere ayaa gudoomay lacag kaga timid Dowladda Federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha Guddigaan Maxamed Muxumad Aadan oo dhanka kalana ah Gudoomiyaha Gobolka Gedo ayaa guddoomay lacag gaareysa $100 kun oo Doolar oo guud ahaan Dadka Gobolka kunool la gaarsiinayo. $25 Kun oo Doolar kamid ah Lacagtaasi waxaa loogu talagalay Dadka Barakacayaasha ah, isagoona Ballanqaaday in ay ...
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in la joojiyo Shuruud la’aan Dagaalo kasoo Cusboonaaday Gobolka Sool. Waxa uu sheegay in aanan xiligaan loo baahneen Dagaalo dib u celiya, sidaa awgeed waxa uu sheegay in uu ka walaacsanyahay dagaalka saaka kasoo cusboonday deegaanka Tuka-raq ee Gobolka Sool, kaasoo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah. Madaxweynaha waxa uu ...
Wakiilka Qaramada Midoobe oo Hargeysa kula kulmay Madaxweynaha Maamulka Somaliland.
Michael Keating iyo Wafdigiisa ayaa lagu soo dhaweeyay Magaalada Hargeysa, waxaana ka qeyb qaatay Mas’uuliyiin ka socota Madaxtooyada Somaliland oo uu hogaaminayay Wasiirka Arrimaha Dibadda Dr Sacad Cali Shire. Aqalka Madaxtooyada waxaa kusii sugnaa Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo Wafdiga Keating Qaabilay ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo isla markaana ay ka wada hadleen Arrimo dhowr ah oo ...